Diam-penina | Jolay 2006
Papa no fiantson'ny ankizy an'i Dadanay
Fiainana — Nampidirin'i fraz @ 09:01
Mpampianatra asa marika (matematika) no nahafantaran'ny be sy ny maro azy. Nampianatra tany Antsirabe sy tao Antananarivo izy. Naharitra teo amin'ny 27 taona teo ho eo izy no nampianatra asa marika tao amin'ny ESCA Antanimena. Izaho dia anisan'ny mpianany sady zanany rahateo. Betsaka ireo ankizy mpianany no tsy nanadino azy, betsaka koa ireo izay tena natahotra azy tamin'ny izy ireo mpianany, rehefa hanao examen izany dia misy tena migogogogo mitomany mihitsy (tena marina io)
Mangina heno hatramin'ny lalitra maneno ao am-pianarana rehefa mampianatra izy, izy anefa tsy masiaka nefa tsy hentitra be ihany koa. Raha tia mikirakira marika dia tsy heno akory ny fandehan'ny adin'ny roa.
Tamin'izaho mpianany dia mitovy amin'ny ankizy rehetra ihany. Roa taona aho no mpianany izany hoe 1ère sy Terminale. Classe de seconde aho no nampiany farany teo amin'ny famerenana any an-trano, fa nanomboka teo dia nandeha samy irery, indraindray fotsiny izy no manampy kely taty aoriana. Ny zandriko vavy koa dia nampianarina taty aoriana fa vetivety ihany, avy eo moa izy nijanona nisotro ronono.
Amin'izao izy dia tsy mampianatra marika intsony, ny manao mots croisés amin'ny gazety sy boky ireny no tena fialam-boliny. Anisan'ny tia
mamaky boky be ihany koa izy.
"Papa" moa no surnom fiantson'ny ankizy azy tany am-pianarana. Dada no kosa fiantsonay azy any an-trano. RAZANAMPARANY François no tena anarany.